Madagasikara: Ny famotorana miafina niainga hatrany an’ala momba ny raharaha-na andramena (bolabola) · Global Voices teny Malagasy
Madagasikara: Ny famotorana miafina niainga hatrany an'ala momba ny raharaha-na andramena (bolabola)	Voadika ny 23 Aogositra 2010 9:40 GMT
Zarao: Iray amin'ny vokatry ny faharetan'ny krizy politika eto Madagasikara ny fiantraikan'ny sazy mihatra amin'ny tontolo iainana, indrindra fa amin'ny ala voajanahary noho ny vola betsaka azo noho ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny andramena (bolabola). Ny fiasana miaraka eo amin'ny mpikatroka manampahaizana manokana momba ny fiarovana sy ny fitahirizana ny tontolo iainana sy ireo fikambanana mifofotra ho amin'ny mangarahara miady amin'ny kolikoly no nahafahana nanangom-baovao momba ity heloka bevava atao amin'ny tontolo iainana ity. Ny fanadihadiana nataon'ny sampan-draharaha mahaleo tena misahana ny tontolo iainana isan-karazany no nahafantarana fa mitentina $460.000 Amerikana ny andramena (bolabola) voatrandraka isan'andro. Voalazan'ny tatitra ihany koa fa eken'ny fitondram-panjakana eto Madagasikara ity fitrandrahana tsy ara-dalàna ny andramena ity noho ny fanomezany alalana ny fitaterana kontainera misy ny andramena. Nihoatra ny roa taona no nanatontosana ny fanadihadiana izay natomboka fony mbola ny teo aloha no nitantana ny firenena. Mbola vao amam-bolana kosa vao nalaza ny momba ity lohahevitra iray ity rehefa misy ny adihevitra politika, ny filazan'ny gazety sy haino aman-jery malagasy noho ny porofo tsy azo lavina navoakan'ny sampan-draharaha voatonona etsy ambony.
Lahatsary navoakan'ny Globalwitness.org nanangom-baovao momba ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny andramena eto Madagasikara
Mendri-piderana ny nikirizan'ny fikambanana maro misahana ny tontolo iainana sy ny mangarahara nanao ny fanadihadiana na dia eo aza ny savorovoro politika, ny tsy fitombenan'ny ara-dalàna ary ny fandrahonana ho faty. Nitafatafa tamin'i Rhett A. Butler, nanangana ny vohikalan'ny haitontolo iainana sy ny fiarovana azy antsoina hoe Mongabay sy i Reiner Tegtmeyer, mpikambana ao amin'ny ekipan'ny Global Witness, fifandaminana manameloka ny fitrandrahana tsy manara-dalàna ny loharanon-karena voajanahary sy ny rafi-pifampivarotana iraisam-pirenena izahay ka niompana tamin'ny fanamby hiarovana ny tontolo iainana amina firenena tratran'ny fahirano sy tamin'ny anjara asan'ny teknolojia amin'ny fanangonam-baovao hanaovany tatitra ny resaka. Azo jerena eto (Global Witness) na eto (Mongabay) moa ny tatitra feno momba ity raharaham-barotra tsy manara-dalàna ity sy ireo tompon'andraikitra tafiditra amin'izany. Misy ihany koa ny tatitra politika momba ny fiarovana ny tontolo iainana navoakan'ny Madagascar Wildlife Conservation sy ny Jane Goodall Insitute ary ny International Resources Group, USAID mbamin'ny Madagascar National Parks. Samy nahaleo tena avokoa ny famotorana nataon'izy ireo afa-tsy tamin'ny tranga vitsy dia vitsy tokoa nisiana fiasana miaraka.
Ekipan'i Mongabay eto Madagasikara- Isaorana Benja R. ao @ wildmadagascar.org
Ny anjara asan'ny Teknolojia vaovao sy ny sandam-pandaniana nandritra ny famotorana: Nanazava i Rhett Butler fa tsy ny fanangonana porofo ihany no ilana ny ekipa fa ny fanairana amin'ny alalan'ny vaovaon-gazety sy ny valan-tserasera ihany koa:
Nanana ny lanjany tokoa ny fanangonam-baovao sy ny fandrafetana izany nataon'i Jeremy Hance, Rowan Gerety ary ireo mpanome vaovao avy ao an-toerana. Naka sary tamin'ny alalan'ny finday sy fakantsary tsotsotra ny mpanome vaovao ary nandefa izany tamin'ny imailaka na tamin'ny finday (sms). Narahin'izy ireo maso ny fanondranana an-tsambo teny an-tseranana ary nanao tatitra ny misy azy tamin'ny alalan'ny finday ry zareo ireo. Nanampy ara-bola tamin'ny alalan'ny fividianana sary raitra dia raitra (azo tamin'ny zanabolana) ny Missouri Botanical Garden hamantarana ny toerana itahirizana ny andramena. Nampitaina tamin'ny fitondram-panjakana teto an-toerana (izay tsy dia nanao inona loatra) ireo vaovao ireo, nampitaina ihany koa tamin'ny sampan-draharahan'ny jono sy ny fiainana “dia” Amerikana (U.S. Fish and Wildlife Service) hahafahany manao famotorana amin'ny alalan'ny lalàna Lacey, tamin'ny delegasiona frantsay any Copenhagen ary tamin'ny haino aman-jery (izay tsy nahalala ny raharaha ny ankamaroany) [..] Lafo dia lafo tokoa araka ny fahafantarako azy ny vidin-tsary amin'ny zanabolana ary tsy dia tsara loatra ny sary alaina amin'ny alalan'ny Google Earth amin'ity raharaha ity. Na ny Mongabay aza dia tsy manana tetibola ampy ka miankina tanteraka amin'ny alalan'ny fanolorantena tsotra sy ny fiasana miaraka.
Nasongadin'i Reiner Tegtmeyer ihany koa fa maro ny olona nirotsaka tamin'ny fanadihadiana sy ny fanaovana tatitra avy amin'ny Global Witness sy ny hafa. Notsinjarainy araka izao manaraka izao ny saram-pandaniana nandritra ny famotorana:
a) Ny valam-pamaritan'ny famotorana (toerana, tematika), b) ny zavamisy ara-pitaterana eto amin'ny firenena sy ny saran'ny fitaterana an'habakabaka, c) ireo olona na fikambanana tafiditra anatin'ny famotorana mila hakana hevitra ary d) ny manampahaizana manokana eto an-toerana (teknisiana, mpitari-dalana, mpandika teny) ilaina hanaovana fifanarahana. Eo ho eo amin'ny 50.000 ka hatramin'ny 80.000 dôlara amerikana eo ho eo isaka ny efatra herinandro no lany amin'ny famotorana tahaka itony eto Madagasikara ka tafiditra amin'izany ny lany amin'ny fampitaovana sy ny fitantanana, ny fiantohana ary ny famokarana sy ny famoahana tatitra.
Sary azo tamin'ny zanabolana ahitana kontainera andramena, sary avy amin'ny Missouri Botanical Gardens
Fanamby amin'ny fiarovana ny tontolo iainana
Toerana lavitra ho an'izao tontolo izao i Madagasikara ary na ny ala voanjanahary aza dia toeran-davitra ihany koa ho an'ny Malagasy monina eto an-drenivohitra. Saingy tsy ny halavirana kosa no olana ho an'i Reiner Tegtmeyer fa ny tsy fisian'ny finiavana politika hisorohana ny fikapana hazo tsy manara-dalàna: Ny fanamby goavana dia ny fandravana ny firaisana tsikombakomba eo amin'ny mpitondra fanjakana, ary singanina amin'izany araka ny resaka mandeha ny praiminisitra, sy ireo deban'ny fitrandrahana hazo any amin'ny faritra SAVA. Vokatr'izany dia manome alalana hanondranana hazo sarobidy “manokana ” (exceptionnel) ho an'ireo debadeban'ny fanondranana hazo ao amin'ny faritra SAVA izay fantatra fa hazo nokapaina tsy manara-dalàna hatrany ny governemanta. Saingy eo ihany koa ny tsy fananam-bola mialoalo amin'ny fitondrana vonjimaika noho ny sazy mihatra amin'ny firenena ka mahatery azy ireo hitady vola amin'ny fomba rehetra. Fanamby hafa ankoatra izany ihany koa ny tsy fahampian'ny olona sy ny tahiry ary ny fampitaovana amin'ny fitantanana ny sampandraharahan'ny valan-javaboarim-pirenena sy ny sampandraharaham-paritra misahana ny rano sy ny ala ka lasa tsy maharaka sy tsy mahomby loatra ny fanarahamaso. Mamaha olana amin'ny ampahany ihany ny fiaraha-miasa amin'ny mpitandro ny filaminana saingy tsy vahaolana maharitra velively izany. Ankoatra izany, manimba ny fanenjehana ireo mpandika lalàna ihany koa ny firaisana tsikombakomba amin'ireo zandary sasantsasany.
Mieritreritra ihany koa i Rhett Butler fa manana ny lanjany lehibe ny finiavana politika. Nisy vondro-tafika manokana (task force) najoron'ny fitondrana volana vitsivitsy lasa izay ka kely ihany ny vokatra azo ary nitaraina ireo mpikambana ao aminy fa tsy mbola nahazo ny karamany mihitsy [fr]. Nomarihan'i Butler ihany koa fa niharan'ny fanafihana an-tserasera ihany koa ny vohikalany ary nahazo fandrahonana ho faty noho ny fikasany hamoaka ity fitrandrahana tsy manara-dalàna ahazoana volabe ity:
Tsy matoky aho anefa fa hitsahatra vetivety ity fikapana sy fanondranana an-tsambo andramena tsy manara-dalàna ity. Misy fandraisana andraikitra politika vao mety hifarana ity karazam-barotra ity. Amin'ny fomba fijeriko, tonga eo amin'ny dingana tokony idiran'ny mpandray anjara hafa ankehitriny ny zavamisy hirosoana amin'ny fikaroham-bahaolana. Olana moa ny tsy firaharahian'ny famoaham-baovao loatra ity raharaha ity ary tsy mahalala na inona na inona momba an'i Madagasikara akory ny ankamaroan'ny Amerikana [..] Tsy te-hiara-mihosina amin'ny mpanao politika eto Madaasikara aho. Samy efa nitady fifandraisana tamiko avokoa na ny ankolafy Rajoelina na ny ankolafy Ravalomanana saingy tsy misy novaliako izy roa tonta satria samy tsy manana vahaolana mivaingana hampitsaharana ny fandraharahana tsy manara-dalàna ry zareo. Tratran'ny fanafihana an-tserasera ny vohikalako tamin'ny volana marsa 2010, volana nampivezivezy indrindra ny sambon'ny Delmas [mitatitra ny andramena]. Paika roa no nentina nanafihan-dry zareo azy ka ny iray tena bontolo mihitsy, ilay hafa kosa somary miolaka toa niainga avy any Shina, nefa sarotra ihany ny milaza izany. nahazo fandrahonana tamin'ny imailaka avy amin'ireo mpifandray tendro amin'ny mpanao raharahan-kazo (mikasa hamono ahy sy ny ankohonako koa amin'ny fandrahonana sasany). Saingy tsy mahalala ny nisy ahy mihitsy ry zareo ary narovako fatratra ihany koa ny mombamomba ireo mpiara-miasa amiko sy ireo loharanom-baovaoko.
Reniranon'i Manambolo eto Madagasikara natolotr'i Benja R. ao @ wildmadagascar.org
Vahaolana hampahomby kokoa ny politikan'ny tontolo iainana
Manondro ny lahatsorany i Rhett Butler eto:
Fepetra fampitsaharana tanteraka ny fitrandrahana ampiarahana amin'ny fampiatoana ny fanenjehana ny mpivarotra sy fananganana ny politikam-pambolenkazo tohanana avy amin'ny vola azo tamin'ny fivarotana ireo bolabola notrandrahana tsy ara-dalàna. Ampiharina avy hatrany ny fepetra ka saziana fonjaina maharitra izay mbola mandika izany. Ny andramena rehetra miandry ny fanondranana azy ao Vohemar, Toamasina ary ny tanàna hafa voatonona mazava dia tokony homarihina (laharana) manokana hiadiana amin'ny hosoka (code anti-contrefaçon) (ilaina amin'ny fandoavana ny fadintseranana eo ampanondranana) ary tombohina amin'ny fitaovana nomerika hanaovana ny fanaraha-maso azy ireny. Hatao lavanty amin'ny alalan'ny fomban-tsena mangarahara ny andramena — tokony ho voamarika sy hitan'ny besinimaro ny laharan'ny hazo sy ny laharany.
Nasongadin'i Reiner Tegtmeyer ny filana fampiofanana ny tompon'andraiki-panjakana handreseny ny kolikoly, ny fanekena ny mponina ao an-toerana honina sy hampiasa ny tany ara-dalàna ary ny fametrahana fanoitra amin'ny alalan'ny fanampiana ara-bola sy ny karazan-tsazy sy onitra mety ampiharina:
Tsy dia misy vokany loatra ny fanerena amin'ny fitondrana efa malaza ratsy/malemy avy amin'ny haino aman-jery iraisam-pirenena (jereo Kambodza sy Burma). Efa kely ny fiantraikan'ny fanomezana fepetra atao hahazoana fanampiana ara-bola. Amin'ny fanajana ny mponina ao an-toerana honina sy hampiasa ny tany, nasehon'ny fikarohana maro fa ny fiompiana sy fambolena nantin-drazana somary kelikely ireny ihany no misy fiantraikany ratsy kely indrindra amin'ny ala; raha ekena ny fizakana ny tany dia ho liana dia liana amin'ny fitandroana ny tontolo iainany sy ny fitsinjovana ny ho aviny ny tantsaha.[..] Manandanja eo amin'ny mpanapa-kevitra politika eo amin'ny firenena sy iraisam-pirenena mbamin'ny fikambanana tia manampy ny ady amin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny ala, sy ny fitondrana tsara tantana: Ny lalàna Lacey avy amin'ny Kongresy Amerikana sy ny “Adidy Hahay hitondra tena” avy amin'ny Antenimiera Eoropeana. Saro-toerana tokoa ny fampiatoana ny fanampiana izay karazana sazy ho an'ny firenena atoka-monina. Tsy vitan'ny hoe mamela ny governemanta Malagasy tsy manambola hitodika hanao zavatra tsy ara-dalàna amin'ny alalan'ny asam-panaraha-maso manokana sy mahazatra ihany fa miteraka fahaverezan'asa maro dia maro sy mampitombo ny fampiasana zaza tsy ampy taona. Io toe-java-misy io no manamora ny fahazoan'ireto deban'ny fitrandrahana hazo ireto olona hanao asa maloto sy mafy dia mafy hanapaka sy hitatitra hazoala, andramena ary voamboana mba hiavota-tena. Tokony hanohana ara-bola sy hanofana ireo fikambanana saiky miahy tena tahaka ny Madagascar National Parks (MNP) ny Fiarahamonina Iraisam-pirenena hanameloka ny asa tsy ara-dalàna ary [hanasa] ny vondrona tompon'andraikitra. [..] Tokony hanokam-bola hampahomby ny asam-panaraha-maso ny asa any an'ala ny fitondrana malagasy amin'ny fandraofana [hazo] noho ny fahataran'ny fandoavana sy ny fivarotana ireo tahirin-kazo sarobidy tsy ara-dalàna. Ankoatra ny fanisana nataon'ny fitondrana tamin'ny desambra 2008 tao amin'ny tanàna lehibe indrindra any amin'ny faritr'i SAVA dia tokony isaina [omena laharana] ihany koa ny hazo sarobidy voatahiry any an-toeran-kafa. Na izany aza, tsy maintsy potehina avokoa ny hazo rehetra tsy manana laharana [tsy tao anaty fanisana] fa izany ihany no fomba mahomby hampitsaharana ny fikapana hazo.
Eritreritra farany: Reth Butler
Nahazo fampitandremana aho fa tsy afa-miverina eto Madagasikara intsony mandritra ny fotoana itantanan'ity fitondram-panjakana ankehitriny ity ny firenena. Mampalahelo izany satria i Madagasikara no firenena mamiko (raha ny marina dia avy amin'ny anaran'ny Nosy Mangabe eto Madagasikara no niavian'ny anarana hoe Mongabay) saingy izay no sandan'ny fiezahana hampitsaharana ny fanapotehina ny ala mahafinaritr'i Madagasikara.
Reiner Tegtmeyer: Ny anay ato amin'ny Global Witness dia tsy ho an'ny sarambambem-bahoaka loatra ny asanay mampiharihary ny asa manakolikoly amin'ny fitrandrahana ny loharanon-karena voajanahary sy amin'ny rafitry ny varotra iraisam-pirenena, ny loharanon-karena miteraka ady ary ny fanosihosena ny zon'olombelona sy ny tontolo iainana, fa mitodika amin'ireo mpanapa-kevitra politika isam-pirenena sy iraisam-pirenena ary amin'ny Fiaraha-monina iraisam-pirenena izay liana na tafiditra amin'ny politika na manohana ny fitrandrahana ny loharanon-karena voajanahary amin'ny ankapobeny.
Tafatafa amin'ny teny frantsay niarahana tamin'i Hery Randriamalala, iray amin'ireo mpitarika ny fikarohana hanaovana tatitra ho an'ny MWC sy ny JGI.
Mongabay eto Madagasikara
Tantaran'ny Afrika Mainty farany 3 andro izayAfrika Avaratra sy Afovoany AtsinananaNy “Alice Any An-tanin'ny Fahagagana” Araka Ny isainan'ilay Libaney-Frantsay Mpitsoka Trompetra Azy Rehefa Atao Gadona Hip-Hop Opera
3 andro izayOgandaTaorian'ny Fisamborana Ireo Tanora Mafàna Fo, Miteny Manohitra Ny Tsimatimanotan'ny Mpitandro Filaminana Ny Ogandey
Soratra miverina: Fiarovana ny Ala Afrikana: Lova Navelan’i Wangari Maathai · Global Voices teny Malagasy	[…] tsy ara-dalàna ity hatramin'ny nipoahan'ny krizy 2009, araka izay efa voalaza mialoha ato anatin'itony tafatafa itony sy ity tatitra […]
28 Septambra 2011, 13:20	Soratra miverina: Tolo-Tanan’i Frantsa Sy Ny Banky Mondialy Hanampy Ny Firenena Afrikana Hahay Hifampiraharaha Amin’ny Harena An-kibon’ny Taniny · Global Voices teny Malagasy	[…] Shina eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana loharanon-karena voanjanahary, indrindra fa ny fanondranana bolabola tsy ara-dalàna [mg]. Saingy ny nataon'i Frantsa teto Madagasikara nandritra ny krizy politika 2009 no […]
10 Oktobra 2012, 19:17	Ajanony ihany
Fifandraisana iraisam-pirenenaFitantanam-pitondranaTeknolojiaTontolo_iainanaTeknolojia mampangarahara asa